Wararka Maanta: Arbaco, Jan 22, 2014-Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee HRW oo Eedeyn u jeedisay Kenya
Hay’adda ayaa warbixin sanadeedkeeda ku sheegtay oo soo baxay shalay ku sheegtay in xukuumadda Nairobi ay ku kacdsay tan iyo markii ay xilka kala wareegtay xukuumaddii ka horeysay xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha ah.
Xukuumadda Kenya ayaa lagu eedeeyay inay sannadkii hore culeys weyn saartay qoxootiga Soomaalida ah ee dalkeeda ku nool sida inay ku goodisay inay xirayso xeryaha ay dadkaas ku jiraan uguna baqday qoxootiga inay dib ugu laabtaan dalkoodii, kaddib markii ay qoxootiga ku eedeysay inay mas’uul la yihiin amni-darrada Kenya ka taagan.
Sidoo kale, HRW waxay sheegtay in qoxootiga Soomaaliyeed ee dalka Kenya ku nool ay dhibaato la kulmaan mar walba oo Kenya ay qulqulad ka dhacdo, iyagoo xusay in dadka Soomaaliyeed si gaar ah loo beegsado, iyadoo lagu xusay warbixinta in booliiska Kenya ay si xun ugu dhibaateeyen Soomaali badan howgallo ay ka sameeyeen xaafadda Islii ee magaalada Nairobi 2012 iyo 2013.
“Bulshada Soomaaliyeed markiiba ma soo sheegin saameyn aargoosi ah oo ay kala kulmeen weerarkii lagu qaaday Westgate Mall, laakiin waxaa jiray warbixinno isugu jira xarig iyo baad ay booliska ka sameeyeen xaafadda Islii ee magaalada Nairobi bilihii November iyo Oktoobar sannadkii hore 2013,” ayaa lagu yiri warbixinta.
Warbixinta hay’adda waxaa sidoo kale lagu sheegay in bulshada rayidka ah lagu hayo cadaadis, iyadoo la dilay sannadkii hore ruux u dhaqdhaqaaq xuquuqd aadanaha, dhowr kalena loo hajabay.
"Bishii September laba xubnood oo bulshada rayidka ah una dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo kala ah Maina Kiai iyo Gladwell Otieno ayaa waxaa u hanjabay taageerayaasha madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkiisa dalka Kenya iyagoo ugu baaqay inay faraha kala baxaan dacwadda labadan mas’uul uga socota ICC," ayaa warbixinta lagu yiri.
Warbixintu waxay xukuumadda ku eedeeyay inay joojisay xiriirkii ay horay ula lahayd maxkamadda caalmiga ah ee ICC iyo ballanqaadkii ahaa inay la sameyn doonto iskaashi maxkamada caalamiga ee dambiyada dagaalka oo ay kiisas dacwo ah kaga furan yihiin madaxda dalkaas ugu sarreysa.
HRW ayaa dib u eegis ku sameysay xuquuqda aadanaha 90 oo caalamka ku yaalla, kuwaasoo ay ku jirto Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay weli dhibaatooyin dhinaca cadaaladda iyo nabadda ahi jiraan.